Ireland's batsman Andrew White (right) takes a swipe as Zimbabwe's wicket keeper Tatenda Taibu waits for an opportunity to catch the ball in the first one-day of the three internationals at Harare Sports Club, in September. Zimbabwe won by two-wickets. © Cricbuzz
Bulawyo archbishop Pius Ncube (right) and his supporters stage a protest against the government of Robert Mugabe as the cricket World Cup match between Zimbabwe and Australia gets underway in Buawayo, in 2003. Banner reads, "Christians together for justice and peace." © Cricbuzz
Zimbabwean cricket squad celebrates the dismissal of South African batsman JP Duminy (unseen), on October 22, during a recent One Day International. Zimbabwe's political turmoil dramatically spilt over into cricket with an infamous 2003 World Cup black-armband protest for the "death of democracy" under President Robert Mugabe, the sport's patron. © Cricbuzz
"If it was, say, three years ago, it would never have even been discussed," said commentator and Zimbabwe Cricket staffer Dean du Plessis on the thawing of relations toward the long-blackballed host nation.